नेपाल प्रहरीमा उच्च सतर्कता : ड्युटीमा ‘मास्क’ अनिवार्य ! हात नमिलाउने, नमस्ते गर्ने - Himali Patrika
नेपाल प्रहरीमा उच्च सतर्कता : ड्युटीमा ‘मास्क’ अनिवार्य ! हात नमिलाउने, नमस्ते गर्ने
हिमाली पत्रिका २१ फाल्गुन २०७६, 8:02 am
काठमाडौं । कोरोनाभाइरसको सन्दर्भमा विश्वजगतले सजगता अपनाईरहेको बेला नेपाल प्रहरीले पनि उच्चसतर्कता अपनाउन थालेको छ। चीनको वुहानबाट पुरै विश्वभर फैलिरहेको कोरोनाभाइरसको असर नेपाल प्रहरीमा पनि पर्न सक्ने भएकाले संगठनले पुर्वसतर्कता अपनाएको हो । सुरक्षा संगठन समूहमा रहने भएकाले सम्भावित खरताबारे समयमै सतर्कता अपनाइएको हो ।
प्रहरीले तालिम, गस्ती, छापा हान्ने लगायतका कार्य समूहमा गर्दै आएको छ । यसबाहेक सभा सम्मेलन, भिडभाड हुने स्थानमा समेत प्रहरीको उपस्थिति रहने गर्छ ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी (प्रस्तावित एआइजी) शैलेश थापा क्षेत्रीका अनुसार प्रहरी अस्पताल र प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत स्वास्थ्य आन्तरिक रुपमा स्वास्थ्य सचेतना सुरु गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘‘विमानस्थल, ट्राफिक चेकिङ र प्रहरीले भिडभाडमा ड्युटी गर्ने सम्भावित स्थानमा मास्क लगाउन भनेका छौं । त्यसबाहेक साबुनपानीले हात घुने, स्वास्थ्यमा समस्या देखिए स्वास्थ्य परीक्षण लगायतको व्यवस्था गरेका छौं ।’’
सकेसम्म हात नमिलाउन र नमस्ते गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । चिकित्सकले समेत नमस्ते गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । आन्तरिक रुपमा अभिवादन गर्ने भए पनि कतिपय अवस्थाले सेवाग्राही वा अन्य याक्तिसँग हात मिलाउनुपर्ने भए पनि सकेसम्म हात नमिलाउने निर्देशन दिइएको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए ।
उनका अनुसार कोरोनाकै प्रभावका कारण यही फागुन २३ र २४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा हुन लागेको सुरक्षा गोष्ठी समेत तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
यस्तै कोरोनाकै प्रभावको सबैभन्दा ठूलो असर प्रहरीको मापसे चेकिङमा देखिएको छ । कोरोना सं क्र मणको त्रासका कारण ट्राफिक प्रहरीले चेक गर्दै आएको मापसे परीक्षणमा असर परेको हो । ट्राफिक प्रहरीसँग पर्याप्त मात्रामा ब्रेथलाइजर मेसिन नभएका कारण कैयौं स्थानमा मुखले सुँघेर पनि मापसे चेक गर्दै आएको थियो ।
तर अहिले उक्त प्रक्रिया रोक्नुपरेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीम ढकालले बताए । नजिकै गएर चेक गर्नुपर्ने भएकाले कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएको भए असर गर्न सक्ने भन्दै त्यसको विकल्पमा छलफल भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।